Ucwangcisa njani iinkwenkwezi ngeyunifomu? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokulungisa iinkwenkwezi kwiipaulets?
Kuba isikhundla semikhosi singathiwa ngamagxa, ulwalamano olusisiseko phakathi kwenani nobungakanani beenkwenkwezi luqondakala kumgaqo.
Apha ngezantsi kukho inkqubo emiselweyo yokubeka iinkwenkwezi emagxeni esithuba esithile.
Nangona kukho umohluko kumbala kunye nesitayile seengubo kwiinguqulelo ezahlukeneyo kwifom yemihla ngemihla, inani leenkwenkwezi kwiiyunifom zihlala zifana. Ngokwesiqhelo, iinkwenkwezi ngeyunifomu zibekwe ukusuka ezantsi ukuya phezulu, kwaye ububanzi kunye nobungakanani bazo buxhomekeke kwiliphi inqanaba umnini wazo anazo.
Apha ngezantsi kukho itheyibhile ebonisa indawo echanekileyo yeenkwenkwezi kwimigca yamagxa kwaye nganye yazo imela ntoni.
Ukuba eli lixoki, kuya kubakho iinkwenkwezi ezimbini kuphela kwaye zibekwe kumtya wegxalaba malunga ne-2,5 cm ukusuka kumda.
I-lieutenant ephezulu - enye ethembeni lomtya wamagxa yongezwa kwezi nkwenkwezi zimbini, ngaloo ndlela zenza unxantathu. Ibekwe kufutshane nentamo 2,5 cm.
Ukapteni - enye inkwenkwezi embindini we-epauletera eyi-2,5 cm kufutshane nentamo yongezwa kwi-Starleysky trm ngama-asteris ngendlela yomxantathu.
Amagosa aphezulu aneenkwenkwezi ezikhulu:
Inkulu-enye inkwenkwezi embindini webhanti yamagxa kwi-4,5 cm ukusuka kumda.
U-Lieutenant Colonel - Iinkwenkwezi ezi-2-indawo njenge-lieutenant.
I-Colonel - ilungiselelo lexantathu elifana ne-starley.
Umkhonzi kwinkonzo yasemkhosini. Ijoni ngalinye liyahluka ngokwezikhundla. KwiRussian Federation kukho inani lama-20 lamajoni omkhosi, iintlobo ezi-2 zomkhosi nomkhosi. Kwiyunifomu yesergeant kukho izitayile zentsimbi (iikona) () Iarubhi (5mm) ebanzi (15mm) yegolide .. Amagosa namagosa ewaranti iyunifomu ziinkwenkwezi zegolide.
Ke, uluhlu lomkhosi luyehluka ukuze ube nokujonga kwaye uqonde kwangoko ukuba ngubani ophambi kwakho, kweliphi inqanaba kwizikhundla eziphezulu, amapolisa anayo nenkqubo yabasebenzi bawo nakwamanye amaqumrhu orhulumente.
indawo yeenkwenkwezi iyunifom ixhomekeke kwinqanaba.
kukho iinkwenkwezi ukusuka kwi-enigns ukuya kwijenerali, apha ubungakanani beenkwenkwezi kunye nenani labo lixhomekeke kwinqanaba.
ezinkulu iinkwenkwezi - ezikuyo.
I -ignign ineezincinci ezi-2, i -ignline ephezulu ineenkwenkwezi ezi-3 ezincinci kwimigxobho ngaphandle kwemikhala (oku kukubamba ngokuqhawula amagxa)
i-lieutenant, i-lieutenant ephezulu, umphathi-2, 3, 4, ngokulandelanayo, ekulandeleni sele kukho ukucace gca, oko kukuthi, umtya omnye phakathi kwe-epaulet.
enkulu, i-lieutenant colonel kunye ne-colonel sele ziziinkanyezi ezinkulu (ezingaphantsi kwembonakalo ngokubanzi, kodwa zingcono) - 1, 2, 3, ngokulandelelana, kwimingxunya yamagxa enemikhala emibini.
Iinjengele - 1, 2, 3, ngokulandelelana, eyona nto iphambili, inenekazi ngokubanzi, ikoloneli ngokubanzi, sele zikho iinkwenkwezi ezinkulu kwaye ngaphandle kwemikhala kwigolide)
Indawo indawo ye-insignia (iinkwenkwezi) kumaphethelo egxalabeni kuxhomekeke kwisikhundla somkhosi kunye nohlobo lwamagxa asebusweni (ukuthunga okanye ukuhambisa)
Ukuba ngokubanzi, ke ukubekwa komgama weenkwenkwezi kulinganiswa ukusuka kumda ongezantsi wenxalenye yamagxa. Kuxhomekeka kwinqanaba lomkhosi, umgama kwinkwenkwezi yokuqala kumacala onke egxunyekwe kuwo onke amabakala kufuneka abe yi-2,5 cm, ngaphandle kwenqanaba lomkhosi junior lieutenant; enkulu kunye enkulu ngokubanzi. Kula manqanaba asemkhosini, inkanyezi kuphela kwayo, ngoko ke ikwindawo eyi-45 cm ukusuka kumda ongezantsi we-epaulette.
Wonke umntu unakho amanye amabakala asemkhosini, apho kukho iinkwenkwezi ezininzi zokuwasukela, umgama osuka embindini wenkwenkwezi yokuqala ukuya kwiziko leenkwenkwezi ulandelayo nayo yi-2,5 cm.
Umzekelo: Iinkwenkwezi zomthengi zikwisisekelo somqolo wokuqala weenkwenkwezi ezimbini ngu-2,5 cm ukusuka ezantsi kwentsimbi egxalabeni (ukuya kumbindi wenkwenkwezi), iinkwenkwezi ezimbini ezilandelayo zibekwe ecaleni komda kumgama oziimitha ezi-2,5 ukusuka kwelinye.
Kwimingxunya egxothiweyo yokususa (imfutshane kancinci kunokuthunga) kumgama phakathi kweenkwenkwezi ngokwahlukileyo kwezinye iindidi zamajoni (amagosa aphezulu) kwaye alingana no-2,2 kunye no-4,5 cm.
Kwitafile Yonke imida phakathi kweenkwenkwezi iyunifomu iyaboniswa:
Inani leenkwenkwezi, kunye nokubekwa kwazo ngokufanelekileyo kumisela inqanaba elithile.
Ke, makhe siqale ngokuxoxa ngenani leenkwenkwezi ngokwamanqanaba ohlukileyo:
Ewe, indawo yeenkwenkwezi kufuneka ijolise kwezi ndlela zilandelayo:
Nalu ulungiselelo oluntsonkothileyo lwazo iinkwenkwezi, ezixhomekeke kwinqanaba. Iya kucace gca ukuba kukho itafile echaza yonke le nto:
Ibalulekile nakumgama ukusuka kumagxa, ewe nase-mm.
Ukufumana esinye isikhundla kwinkonzo, oku akuthethi kuphela ibhonasi eyimali kunye nokunyuka kwemivuzo kunye nokwandiswa kwezibonelelo, kodwa notshintsho kwindawo yokufakwa ngaphakathi kwiiyunifomu.
Kwinqanaba ngalinye elitsha, kudityaniswa inkwenkwezi enye, kwaye zonke ziqala ngenkanyezi enye ye-aluminium etyheli - esi sisikhundla (kwigosa laseburhulumenteni) - uJunior Lieutenant.
Emva kokuba umphathi ethe wafika kwinkwenkwezi elandelayo, iinkwenkwezi zakhe ezine zajika zaya kububanzi obukhulu, okuthetha isikhundla esikhulu.
Emva kokufumana ezinye iinkwenkwezi ezine zalo mdaka, ukunikezelwa kwakhona kufumana enye inkwenkwezi, kodwa nangaphezulu koko kwangaphambili kunye nesihloko sele sivakala - Major Jikelele.
Indawo yeenkwenkwezi iyunifom ayixhomekekanga kwinqanaba elithile kuphela, kodwa nakubungakanani benkwenkwezi.
Umzekelo, inkwenkwezi enkulu yeMarshall ifumaneka embindini we-epaulette.
Iinkwenkwezi zekoloneli ngokubanzi zibekwe kumgca omnye, malunga ne-2,5 cm ukusuka kumtya wegxa kwaye kukho ezintathu zazo (ilungiselelo elinye lalinomgcini ophezulu, umzingeli omkhulu, kodwa iinkwenkwezi zincinci, njenge-colonel, kunye ne-colonel zibekwe kumda onxantathu. .
exhonyiweyo umsebenzi kunye nomsebenzi
Imibuzo ye-59 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,283.